हर्ट अट्याक हुनु अघि देखिन्छन यस्ता सकेत वेवस्ता नगर्नुहोस्! |
हर्ट अट्याक हुनु अघि देखिन्छन यस्ता सकेत वेवस्ता नगर्नुहोस्!
August 12, 2021 adminLeaveaComment on हर्ट अट्याक हुनु अघि देखिन्छन यस्ता सकेत वेवस्ता नगर्नुहोस्!
१ थकान:कहिलेकाहीँ थकित हुनु त सामान्य हो । बेस्सरी काम गर्ने सबैलाई थकान त लागिहाल्छ । तर ससानो काम गर्दा पनि थकाइ लाग्न थाल्यो भने बुझ्नुस्, मुटुलाई दबाब पर्दैछ । मुटुले पर्याप्त मात्रामा रगत पाइरहेको छैन र हृदयघात हुन सक्छ भन्ने लक्षण हो यो । २ छातीमा दबाब:छाती बाउँडिएर आउनु भनेको हृदयघातको चेतावनी हो । मुटु बेस्सरी धड्किने र छाती, पिठ्युँ, दाह्रा, घाँटी, पाखुरा वा माथिल्लो पेट दुख्ने गरेमा पनि हृदयघात हुन सक्छ ।
३ सास फेर्न अप्ठेरो:सास फेर्न गाह्रो हुनु भनेको तपाईंको फोक्सोमा पर्याप्त अक्सिजन नपुगेको हो र धमनी ब्लक भएको संकेत हो । सास फेर्न गाह्रो हुने काम नियमित भइरह्यो भने खतराको घन्टीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । ४ कमजोरी :तपाईं कमजोर र ऊर्जाहीन महसूस गरिरहनुभएको छ भने तपाईंका मांसपेशीले पर्याप्त अक्सिजन नपाएको लक्षण हो । हृदयघातको पहिलो चेतावनी हो यो ।
५ चक्कर र चिसो पसिना :यस्तो लक्षण देखियो भने तत्कालै चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ । बेस्सरी पसिना चुहिनु हृदयघातको प्राथमिक लक्षण हो र दिमागमा अक्सिजन नपुग्दा यस्तो हुन जान्छ ।६ रुघा र ज्वरो :जाडोमा रुघा लाग्नु र ज्वरो फुट्नु स्वाभाविक हो ।
तर धेरै मान्छेलाई हृदयघातको एक महिनाअघि यस्ता लक्षण देखिन्छन् भन्ने थाहै छैन । खोक्दा शरीरको रक्तसञ्चार सहज हुन्छ । मुटुरोगबाट बच्नका लागि सात्विक आहार गर्ने, चुरोट नपिउने, रक्सी नपिउने, पर्याप्त सुत्ने र नियमित अभ्यास गर्ने गर्नुपर्छ । साथसाथै चिन्ता र तनाव नलिने गर्नुभयो भने पनि हृदयघात हुँदैन ।
मौसम पूर्वानुमान:देशका यी स्थानमा ठुलो पानी पर्ने सम्भावना सतर्क रहन आग्रह
२० बर्ष देखीको ग्यास्ट्रिक र पेटको सबै समस्याको साधारण तरिकाले समाधान गर्नुहोस।यस्तो छ उपाय